China neASSEAN vekune dzimwe nyika vafundisi kuti vaite musangano wechimbichimbi wecoronavirus muLaos
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » China neASSEAN vekune dzimwe nyika vafundisi kuti vaite musangano wechimbichimbi wecoronavirus muLaos
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Laos Kuputsa Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
The Sangano reSoutheast Asia Nations (ASEAN) uye China iri kuronga kuita musangano wechimbichimbi, uyo waizoitika kutanga kwaKukadzi 20 muLaos, kuti vakurukure zvitsva coronavirus chirwere chapararira munzvimbo.
Sekureva kwesangano rezvematongerwo enyika, musangano wechimbichimbi weASEAN makurukota ezvekunze anoitirwa kugovana ruzivo nekuvandudza kubatana pakati peChina nenyika gumi dzenyika kurwisa hutachiona.
Iyo coronavirus nyowani yakatanga kuwanikwa muChina, uko huwandu hwevakafa hwapfuura chiuru, uye hwapararira kunenge nyika dzese dzekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia. Mhosva dziri kuwedzera mudunhu, zvinoenderana zvakanyanya nekutengeserana nekushanya kunoyerera neChina. Nyika dzakatora matanho senge kudzora kufamba, kunyangwe ivo vachigadzirira kukanganiswa kwehupfumi.
Kunyangwe ASEAN neBeijing vaine maonero akasiyana pazvinhu zvakati wandei, senge nzvimbo dzekumusoro pamusoro peSouth China Gungwa, vane kufarira kwakafanana mukukurudzira kupindurwa kwepasi rose kuchirwere uye mukuyedza kudzikisa kushushikana kwevanhu.
Vashumiri veASEAN vekune dzimwe nyika vakabata mafambiro avo egore rapfuura muVietnam, nyika iri kushanda sachigaro wesangano gore rino.